ललितपुरमा केटाकेटामै सिन्दुर हालेर विहेः पण्डित आश्चर्यमा | Suddhodhan Online Portal
Home समाचार ललितपुरमा केटाकेटामै सिन्दुर हालेर विहेः पण्डित आश्चर्यमा
ललितपुरमा केटाकेटामै सिन्दुर हालेर विहेः पण्डित आश्चर्यमा
समाचारको शीर्षक पढेपछि तपाईलाई कौतुहल लाग्यो होला । केटा केटाको पनि बिहे ? त्यो पनि नेपालमा ? विदेशमा केटा–केटा वा केटी–केटीबीच बिहे भएकोबारे तपाईले कतै पढ्नु सुन्नु भएकै थियो होला । नेपालमा पहिलोपटक धार्मिक विधि अनुसार केटा केटाको नै बिहे भएको छ । यो समाचार लेख्दै गर्दा बेहुली बनेका केटा आफ्ना केटा श्रीमानको घरमा भित्रिइसकेका छन् । यस्तो बिहे शुक्रबार ललितपुरको कुपण्डोलमा भएको हो । रामेछाप घर भई हाल काठमाडौं थानकोट बस्ने सौरभ तामाङ ९बेहुला०ले झापाका सुरज खत्री ९बेहुली०लाई सिन्दुर हालेर बिहे गरेका हुन् । सौरभले सिन्दुर मात्र हालेनन्, बिहेको जग्गेमा मंगलसुत्र पनि पहिर्याइदिएका छन् । जसरी बिहे मण्डपमा केटा र केटीबीच बिधिपूर्वक बिहे हुन्छ उनीहरुले पनि बिधि पुर्याएर बिहे गरेका हुन् ।
फेसबुकबाट चिनजान भएर एक वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरुले केही आफन्त र साथीभाई जम्मा भएर बिहे गरेका हुन् । बिहेमा सहभागी बेहुलाकी आमा मनकुमारी तामाङ निकै खुसी भएकी थिइन् । बेहुली सुरजका बुबाआमा भने सहभागी थिएनन् । झापामा सुरजकी आमा बिरामी भएका कारण बिहेमा आउन नसकेको उनले बताए । बिहेपछि एकअर्कालाई साथ सहयोग गर्दै श्रीमान श्रीमतीको भूमिकामा बस्ने उनीहरुले बताए । तर उनीहरुलाई नेपालको कानूनले श्रीमान श्रीमतीको रुपमा कानूनी मान्यता भने दिने छैन् । कानूनले हालसम्म समलिङ्गी बिहेलाई मान्यता दिएको छैन् । कानून बनेर आफ्नो विवाह दर्ता हुनेमा आशावादी रहेको उनीहरुले बताए । बिहेपछि उनीहरुले सन्तानका रुपमा धर्मपुत्र राख्ने योजना बनाएका छन् ।
बेहुली सुरज मेकअप आर्टिष्ट हुन् भने बेहुला सौरभ पनि जागिरे छन् । वर्षअघि फेसबुकमा भेटेपछि दुबै जनाबीच कुराकानी हुन थालेको थियो । पहिलोपटक सुरजले सौरभलाई प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए । बिहेको पहिलो प्रस्ताव भने सौरभले गरेका थिए । सुरजले सौरभको प्रस्ताव सम्झिए– ‘तिमी धेरै राम्रो छौ, मनको पनि राम्रो छौ । हामी बिहे गरेर बसौं भन्नुभयो अनि मैले पनि हुन्छ भनेँ ।’सौरभले भने– ‘हामीले १ वर्षसम्म एक अर्कालाई बुझेर नै बिहे गर्ने निर्णय गरेका हौं । एक अर्कालाई बुझ्नका लागि समय दिएर नै आज बिहे गरेका हौँ ।’ सुरजले भने–‘मलाई उहाँको बानी बेहोरा सबै मसँग मिल्ने राम्रो लाग्यो । मेरो सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ । मैले नभनेपनि पहिलेनै मेरो कुरा बुझ्नुहुन्छ ।’
सौरभको नराम्रो बानी भनेको छिट्टै रिसाइहाल्ने रहेको सुरजले बताए । सुरजको बिहान ढिलो उठ्ने बानी नराम्रो रहेको सौरभले बताए । उनले भने–‘बिहान ढिलो उठ्ने यसको बानी छ । सबैभन्दा पहिला मामु उठ्नुहुन्छ, त्यसपछि म उठ्छु, सबैभन्दा ढिला बिहान १० बजे चाहीँ यो उठ्छ् । अहिले छिटो उठ्ने बानी गर्दैछ ।’ बिहेअघि झन्डै २५ दिन उनीहरु घरमा सँगै बसे । कुचो लगाउने, भाडाँ धुने लगायतका घरधन्दाको काम सुरजले गर्ने गरेका छन् । सौरभकी आमाले भनिन्– ‘छोरी मान्छेले जस्तै सुरजले घरको सबै काम गर्छ ।’ फेसबुकमा १ वर्ष प्रेम गरेपछि २५ दिन अघि काँकडभिट्टाबाट सुरज सौरभलाई भेट्न काठमाडौं आएका थिए । भेटेपछि एक अर्काले झनै मन पराएको र यति छिट्टै बिहे भएको उनीहरुले बताए ।
दुई परिवारमा कुरा गरेर पारिवारिक सहमतिअनुसार नै बिहे गरेको उनीहरुले बताए । सुरजको परिवारले पनि उनको बिहेलाई स्वीकार गरेका छन् । ‘तेरो जे ईच्छा छ, जे गर्दा खुसी हुन्छस् त्यही गर’ भनेर सहमति दिएको उनले बताए । सौरभले भने आफ्नी बहिनीले यो बिहेलाई अस्वीकार गरेको कारण आफ्नो चित्त दुखेको बताए ।उनले भने–‘आजको दिनमा हल्का खुसी पनि छु, हल्का नर्भस पनि छु, आज सबैभन्दा मैले मेरो बहिनीलाई सम्झिरहेको छु । किनभने बहिनीले मलाई कहिले पनि स्वीकार गर्नुभएन् । म अलिकति दुःखी पनि छु । बहिनीले इग्नोर गरेको कुराले दुःख लाग्छ तर ममी साथमा हुनुहुन्छ, मलाई यो भन्दा के चाहियो । चेलीबेटी भनेको दाजुभाईसँग रिसाइहाल्छ फेरि बोलिहाल्छ त्यही आशामा छु । आमाले बुहारी भनेर अपनाईसकेपछि एकदिन भाउजु भनेर कसो नअपनाउला रु ’
बिहे गराउने पण्डित थिए त्रिलोचन पौडेल । जीवनमा कहिल्यै पनि केटा केटाको बिहे नगराएका उनलाई सुरुमा कसो गर्ने के गर्ने अनौठो लाग्यो । पछि एक जनालाई बर र अर्को जनालाई बधु बनाएर बिहे गराए । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुका लागि काम गर्दै आएको परिचय समाज नेपालका पदाधिकारीहरुले सुरजको कन्यादान गरे ।बिहेपछि संस्थाका कार्यक्रम संयोजक मनोरञ्जन बैद्यले सरकारले छिटै समलिङ्गी बिवाहलाई मान्यता दिने कानून बनाउन आग्रह गरे । मानिसले आफ्नो लिङ्गअनुसार व्यवहार गर्न पाउने भन्ने सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा गरेको फैसलाअनुसार समलिङ्गीहरु सँगै बस्ने तथा बिहे गर्ने गरेको उनले बताए । बिहेपछि बेहुली बनेका सुरजले अरु ‘गे’हरु पनि खुलेर बाहिर आउनुपर्ने बताए । साथै समाजलाई पनि स्वीकार गर्न आग्रह गरे । उनीहरुले उनीहरुको बिहेलाई कानूनी मान्यता दिन सरकारलाई पनि आग्रह गरे । यसअघि समलिङ्गी पुरुष सुरेन्द्र र तेश्रोलिङ्गी महिला राम गुरुङ ९माया०ले बिहे गरेपनि नेपालमा समलिङ्गी केटा केटाबीच भने यो पहिलो बिहे भएको हो ।
Previous articleकोरोना कहरकाबीचमा गुल्मीमा १२ हजार बढीले दिए रोजगारका लागि आवेदन
Next articleभारतको तुलसियापुर चोकमा लाइफ लाइन हास्पिटलको उद्धघाटन